Dhowr qof oo reer Afghanistan ah oo cibaadeysanayay ayaa ku dhintay qarax ka dhacay masaajid u dhow Kabul - Wardeeq 24 TV Dhowr qof oo reer Afghanistan ah oo cibaadeysanayay ayaa ku dhintay qarax ka dhacay masaajid u dhow Kabul Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Dunida Dhowr qof oo reer Afghanistan ah oo cibaadeysanayay ayaa ku dhintay qarax...
Dhowr qof oo reer Afghanistan ah oo cibaadeysanayay ayaa ku dhintay qarax ka dhacay masaajid u dhow Kabul
Ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhimatay tiro intaa ka badana waa ay ku dhaawacantay qarax ka dhacay masaajid ku yaal duleedka caasimadda Afghanistan ee Kabul, sida ay booliisku sheegeen.
Qaraxan oo dhacay intii lagu jiray salaaddii Jimcaha degmada Shakar Dara ayaa yimid maalintii labaad ee xabad-joojin saddex maalmood ah oo ay ku heshiiyeen dowladda Afgaanistaan ​​iyo Taalibaan munaasabadda ciida ciidul-fidriga awgeed. Ma jirin wax sheegasho deg deg ah oo masuuliyadeed.
Afhayeenka booliska Kabul Ferdaws Faramarz ayaa sheegay in walxaha qarxa la dhigay masaajidka kahor, isagoo intaa ku daray in masuuliyiintu ay fureen baaritaan.
“Tirada dhimashada waxay u kacday 12 qof oo ladilay oo uu kujiro imaamkii masjidka 15 kalena waa la dhaawacay,” ayuu yiri Ferdaws Framurz, oo ah afhayeenka booliiska Kabul, oo cusbooneysiinaya tirada hore.
Sawir ku wareegaya baraha bulshada ayaa muujinayay saddex mayd oo daadsan dabaqa masjidka, halkaas oo ay u muuqatay in waxyeello yar ka soo gaadhay.
Qaraxa ayaa dhacay maalin kadib markii ugu yaraan 11 qof ay ku dhinteen afar dhacdo oo kala duwan oo ka dhacday guud ahaan dalka Afghanistan taasi oo kala jabisay xasiloonidii xasiloonida ee ay ku heshiiyeen dowlada iyo Taliban.
In kasta oo aysan jirin warar sheegaya dagaal toos ah oo u dhexeeya labada dhinac ee dagaalamaya iyaga oo u kuurgalaya xabad joojinta kumeelgaarka ah, haddana qaraxyada waddooyinka lagu aaso ayaa sii waday inay waxyeello u geystaan ​​dadka rayidka ah.
Qaraxan ayaa yimid kadib markii saraakiisha Afghanistan ay jimcihii sheegeen in Mareykanku uu gebi ahaanba ka baxay saldhig weyn oo dhanka cirka ah oo koonfurta ku yaallay xaruntii hore ee Daalibaan ee Kandahar.
Duqeymaha Mareykanka ayaa laga bilaabay saldhigga usbuucii la soo dhaafay si ay uga caawiyaan ciidamada Afghanistan inay dib u riixaan duulaankii ugu weynaa ee Taliban.
Previous articleWasaaradda Maaliyadda oo ka jawaabtay eedeynta uga timid Hirshabelle
Next articleHaweeney lagu dilay Degmada Balcad iyo ninkii dilay oo la qabtay